Yakakwira Precision jekiseni Mould vagadziri uye vanotengesa - China Yakakwira Precision jekiseni Mould Factory
Nemazvo Plastic jekiseni richigadzirisa
Nezvakatsva mujekiseni muforoma tekinoroji, chaiyo jekiseni kuumbwa inoshandiswa kune hwakawanda hunyanzvi mafomu uye inonakidzwa nezvayo mabhenefiti eepamusoro-vhoriyamu yekugadzira maitiro ayo ari zvakare mutengo.
Nemazvo jekiseni Kuumbwa chinhu chakaoma chiitiko chinoda zvikuru zvakavimbika michina, vakapfuma ruzivo vagadziri uye mainjiniya kuti vagadzire epamusoro-chaiyo zvikamu zvekusangana nevatengi zvido, YF Mould hunyanzvi mukugadzira yakagadziriswa magadzirirwo nekugadzira mupfungwa kunobatsira kugadzira zvinoshanda uye zvepamusoro mhinduro mumatanho ese ehupenyu hwechigadzirwa.
Yuanfang Technology ndeye ISO setifiketi inogadzira chaiyo yekuumbwa muSenzhen, China.
Muna 1996, Anonzi HanKing Plastic akatanga Foroma kugadzira uye jekiseni Kuumbwa bhizimisi, Muna 2017, kusangana kukura musika kudiwa, isu akamisa nyanzvi nemazvo muforoma kugadzira fekitari, Yuanfang michina yakavambwa. Isu takatungamira mukugadzira kwepamusoro-kuita kuti uve nemhando yepamusoro yezvigadzirwa uye ugutse vatengi 'nguva yekutungamira.
Isu tinochengetedza mukurumbira pakati pevatengi vedu ne TIGHT TOLERANCE mapurasitiki epurasitiki uye mafomu ejekiseni uye ese marudzi epurasitiki, kusanganisira MULTI-CAVITY mafomu uye gungano epurasitiki zvikamu, zvine kurira kwemhando yepamusoro.
Makore achangopfuura, tinoramba tichisimudzira yedu Isa Mould, Kukunda, Magetsi Mould, Chigadzirwa Chigadzirwa Mould, Multi-mhango Mould, 2-Shot Mould uye isu takabudirira kunakidzwa nemukurumbira wevatengi vedu.
Nemazvo jekiseni muforoma
Kwemakore mazhinji, epurasitiki jekiseni kuumbwa kwave kuri kwakavimbika kugadzira tekinoroji iyo inogona kushandiswa kugadzira akasiyana epurasitiki zvigadzirwa uye zvikamu. Jekiseni kuumbwa inosangana nezvinodiwa nemaindasitiri mazhinji uye inokwana kugadzirwa kwakawanda kwezvikamu zvakasiyana, asi kune zvikamu zvinoshanda zvakanyanya, hunyanzvi hutsva hunodiwa - chaiyo jekiseni kuumbwa.
Iyo chaiyo yeiyo Foroma inowanzoenderana neyakajeka chaiyo yeiyo mhango kukura saizi, kumisikidzwa kwakaringana kwedumbu kana kunyatso kujeka kwenzvimbo yekuparadzanisa inosangana nezvinodiwa. Iwo ekuremekedza kushivirirana kweiyo chaiyo chaiyo jekiseni kuumbwa kunofanirwa kudzorwa pazasi pe 1/3 yekuremekedza shiviriro yezvigadzirwa.
Machinability uye kuomarara. Mune fomati dhizaini dhizaini, huwandu hwemakomba haufanire kuve wakawandisa, uye ndiro yepazasi, ndiro yekutsigira uye mhango yemadziro inofanirwa kuva mukobvu kudzivisa zvakakomba deformation yezvikamu zviri pasi pekupisa kwakanyanya uye kumanikidza kwakanyanya.
Nekudonhedza zvakanaka, chakuvhuvhu chinofanira kudzikisira huwandu hwenzvimbo, kudzikisira mumhanyi, kupfupisa mumhanyi, uye nekupedzisa kwakakwirira kupfuura furuu yakajairwa. Izvo zvinhu zveiyo chaiyo mold chiwanikwa chesimbi ine yakakwira michini simba.
Zvishandiso zvinoshandiswa kugadzira mhango uye mumhanyi zvinofanirwa kurapwa zvakanyanya kupisa, uye sarudza zvinhu zvine huma hwakaomarara (zvikamu zvinokwanisa kusvika HRC52), yakanaka kuramba kupfeka uye yakasimba ngura kuramba.
Hunhu hwejekiseni jekiseni:
1. Zvikamu zvine kukwirira kwakanyanya uye kushivirira kudiki
2. Mould yakanaka uye inoomarara, iyo dhizaini chaiyo yeiyo mhango, mwero wekupedzisa uye kunyatso kuisirwa pakati pematemplate zvakakwirira.
3. Shandisa chaiyo jekiseni muchina kutsiva zvakajairika jekiseni muchina.
4. Tora iyo chaiyo jekiseni kuumbwa maitiro.
5. Sarudza chaiyo jekiseni kuumbwa kwezvinhu.
Isu tanga tichigadzira chaiyo kuumbwa & epurasitiki zvigadzirwa kune vanozivikanwa vatengi mune mota indasitiri, magetsi mainjiniya uye zvemagetsi. Isu tiri mudiwa akakwana kuburitsa yakakwira-chaiyo epurasitiki zvikamu. YF Mould ichashanda newe papfudzi nepfudzi kuti ugutse zvaunoda.
Mould Factory, Tsika Mould, Plastic Kuisa richigadzirisa, Mould Vagadziri, Prototype Mould Vagadziri, Jekiseni Kuumbwa Nesimbi Inoisa,